Jobho 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
20 Zvino Zofari muNaama akapindura, akati: 2 “Naizvozvo pfungwa dzangu dzinonetsa dzinondipindura, Kunyange nokuda kwokunetseka kwangu kuri mandiri. 3 Ndinonzwa kurayira kunondituka; Ndiri kupindurwa nomunhu asinganzwisisi sezvandinoita. 4 Wagara uchiziva chinhu ichi here, Kubvira pakaiswa munhu panyika,+ 5 Kuti kushevedzera kwokufara kwevanhu vakaipa ndokwenguva pfupi+ Uye kuti kufara kwomunhu anotsauka ndokwenguva duku? 6 Kunyange zvazvo kunaka kwake kuchikwira kudenga chaiko+ Uye musoro wake uchisvika kumakore, 7 Anoparara nokusingaperi sezvinoita ndove yake;+ Vanomuona vachati, ‘Ari kupi?’+ 8 Achabhururuka oenda sezvinoitika pakurota, uye havazomuwani; Achadzingwa sezvinoitwa zvinoratidzwa usiku.+ 9 Ziso rakamuona harizomuonizve,+ Uye nzvimbo yake haizomuonizve.+ 10 Vanakomana vake vachatsvaka kunzwirwa nyasha nevanhu vakaderera, Uye maoko ake achadzorera zvinhu zvake zvinokosha.+ 11 Mapfupa ake ave azere nesimba rouduku hwake, Asi richarara pamwe chete naye muguruva.+ 12 Kana zvakaipa zvichitapira mumuromo make, Kana achizvinyungudutsa pasi porurimi rwake, 13 Kana achinakirwa nazvo, asingazvisiyi, Uye kana achiramba akazvichengeta mukanwa make, 14 Zvokudya zvake zvichachinjwa muura hwake; Zvichava nduru yemhungu maari. 15 Akamedza pfuma, asi achairutsa; Mwari achaibudisa mudumbu make. 16 Achasveta uturu hwemhungu; Rurimi rwenyoka ruchamuuraya.+ 17 Haazombooni nzizi,+ Nehova dzouchi noruomba. 18 Achange achidzorera zvinhu zvake zvaakawana uye haazozvimedzi; Sepfuma yaakawana mukutengesa kwake, asi yaasingazofadzwi nayo.+ 19 Nokuti akaputsa-putsa, akasiya vakaderera; Akatora nechisimba imba yaasina kuvaka.+ 20 Nokuti mudumbu make hamuzoregi kurwadza; Zvinhu zvake zvaanoda hazvizomupukunyutsi.+ 21 Hapana chasara chokuti adye; Ndokusaka kugarika kwake kusingazorambi kuripo. 22 Zvinhu zvake zvizhinji pazvinenge zvawanda achange achizvidya mwoyo;+ Simba rose renhamo richarwa naye. 23 Ngazvidaro, kuti zvizadze dumbu rake, Mwari achamutumira kutsamwa kwake kukuru+ Uye achakunayisa paari, kuchipinda muura hwake. 24 Achatiza+ zvombo zvesimbi; Uta hwemhangura huchamubvoora. 25 Chombo chinoita zvokukandwa chichabuda nokumusana kwake, Uye chombo chinopenya chichabuda nomunduru yake;+ Zvinhu zvinotyisa zvichamurwisa.+ 26 Rima rose richachengeterwa zvinhu zvake zvinokosha; Moto usina kupfutidzwa nomunhu uchamuparadza;+ Zvichaipira munhu anopona ari mutendi rake. 27 Denga richafukura kukanganisa kwake,+ Uye nyika ichamumukira. 28 Mvura zhinji ichakukura imba yake; Pachava nezvinhu zvichadururwa pazuva rokutsamwa kwake.+ 29 Uyu ndiwo mugove womunhu akaipa unobva kuna Mwari,+ Iyo nhaka yake yakataurwa inobva kuna Mwari.”